Print Email 2351
အပေါ်ကပြဿနာမျိုးက လူငယ်တော်တော်များများ(အထူးသဖြင့် အမျိုးသားတွေ) တစ်သက်မှာ တစ်ခါတော့ တွေ့ကြုံရလေ့ရှိပါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် တွေ့ကြံုနေရတယ်လို့ထင်ကြတယ်။ ဖြစ်နေပြီလို့ထင်တဲ့လူထဲကအနည်းစုလောက်ပဲ ဆရာဝန်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတိုင်ပင်လိုကြတယ်။ လူအများစုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမပြောကြတာက ပတ်ဝန်းကျင်အမြင်တွေကိုကြောက်လန့်လို့လည်း ပါပါတယ်။ “ယောကျင်္ားမှန်ရင် ကျန်းမာသန်စွမ်းရမယ်၊ အားအင်ပြည့်ဖြိုးရမယ်” အစရှိတဲ့အရပ်စကားတွေကို တစ်သက်လုံးကြားလာရတာကြောင့် အထက်ပါကိစ္စမျိုးကိုယ် ကိုယ်တိိုင်တွေ့ကြံုလာရင်ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုတောင် ထုတ်မပြောရဲတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်။
တကယ်တော့ ဒါဟာရှက်စရာကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုပြဿနာကအမျိုးသားတော်တော်များများမှာ တွေ့ကြံုနေရတာပါ။ နောက်ပြီးကုသနည်းတွေလည်း တစ်ခုမကရှိပါတယ်။
ခန ္ဓာကိုယ်မှာတစ်ခုခုချို့ယွင်းတာကြောင့်ဖြစ်နို်င်သလို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အနှောင့်အယှက်တစ်ခုခုရှိနေတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နို်င်ပါတယ်။ တချို့သူတွေမှာ နှစ်ခုစလုံးကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ခန ္ဓာကိုယ်မှာ ကျားဟော်မုန်းလို့ခေါ်တဲ့ တက်စတိုစတီရုန်းဟော်မုန်း အထွက်နည်းတာ၊ ပိုးသတ်ဆေးဒါမှမဟုတ် တခြားဆေးဝါးတွေရေရှည်သောက်နေရတာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်တာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းအလွန်အကြူးလုပ်တာ၊ နောက်ပြီး အရက်နဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲတာ အစရှိသူတွေဟာ လိင်စိတ်လျော့နည်းတာကို ပိုမိုတွေ့ကြံုရလေ့ရှိပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပြောရင်တော့ စိတ်ကျဝေဒနာ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများတာ၊ နောက်ပြီး မိမိနဲ့ မိသားစုကြားဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ထောင်ဖက်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်အဆင်မပြေ၊ အခဲမကြေတာတစ်ခုခုရှိနေတာ အစရှိတာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အသက် ၄၅နှစ်အထက် လူကြီး ၁၀ ယောက်မှာ ၄ယောက်က ကျားဟော်မုန်းအထွက်နညး်တာမျိုးတွေ့ကြံုရလေ့ရှိပါတယ်။ ဟော်မုန်းအစားထိုးဆေးတွေပေးတာက အငြင်းပွားစရာတွေရှိနေပေမဲ့ အခုထိတော့ အသုံးများတဲ့ကုသနည်းတစ်ခုဖြစ်နေပါသေးတယ်။
တစ်ခုရှိတာက လိင်စိတ်လျော့နည်းတယ်ဆိုတာ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်တတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကို သံသယရှိနေရင် သက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးမှသာ သင့်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးကုထုံးကို သူရွေးချယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီး ကုသနည်းများစွာရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကမှ အသုံးများတဲ့နည်းလမ်းတွေကို ပြောပြပါမယ်။
- ကျန်းမာရေးလိုက်စားပါ - သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာစားသောက်ပါ၊ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ပါ၊ အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပါ၊ ဖြစ်နိုင်ရင် အရက်ဖြတ်ပါ၊ စိတ်ဖိစီးမှုနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်နေပါ။
- ကျားဟော်မုန်းထွက်တာကို အထောက်အကူပြုတဲ့ ကမာ၊ ဂုံး၊ ချောကလက်အနက်၊ ချင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ သလဲသီး အစရှိတာတွေမကြာခဏစားသုံးပေးပါ။(အလွန်အကြူးမစားသုံးပါနှင့်)
- အကယ်၍ကိုယ်သောက်နေတဲ့ဆေးတွေကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေရတယ်ထင်ရင် ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး ဆေးပြောင်းသောက်ကြည့်ပါ( ကိုယ့်သဘောနှင့်ကိုယ်မပြောင်းရပါ!)
- ဆရာဝန်နဲ့ အချိန်ပေးပြီး မိမိပြဿနာတွေကို သေချာဆွေးနွေးပါ။
ဆရာဝန်တွေက သင့်မှာလိင်စိတ်လျော့နည်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်ဖြစ်တယ်ထင်ရင် ကုထုံးတစ်ခုခုစပေးပါလိမ့်မယ်။ အများအားဖြင့်တော့ ဒီလိုဖြစ်တာက ကိုယ်ရောကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်မှာရော အကျိုးသက်ရောက်တာကြောင့် နှစ်ယောက်စလုံးကိုခေါ်ပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကအတူနေချင်ပေမဲ့ ကိုယ့်ဇနီးမယားကစိတ်မပါတာ၊ ဒါမှမဟုတ် ရှက်နေတာ မျိုးဆိုရင် လူနာအများစုက အချိန်ပေးပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတိုင်ပင်တာနဲ့ ပြဿနာပြေလည်သွားနို်င်ပါတယ်။ စိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရတယ်ထင်ရင်တော့ ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့သောက်ဆေးတွေ ပေးမှာပါ။ စိတ်ကျရောဂါကလည်း လိင်စိတ်လျော့နည်းစေတဲ့အချက်တွေထဲမှာ တစ်ခုပါ၀င်ပါတယ်။
ဒါဆိုတချို့တီဗီတို့ ဂျာနယ်တို့မှာကြေငြာနေကြတဲ့ လိင်စိတ်အားတိုးဆေးဆိုတာတွေကရော? ဒါတွေကသင့်လိင်တံကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ အချိန်တစ်ခုထိထောင်မတ်နေအောင်သာ လုပ်ပေးနိုင်တာပါ၊ လိင်စိတ်လျော့နည်းတာအတွက်ကုသတဲ့ဆေးတွေ မဟုတ်ပါဘူး။
အကျဉ်းချံုးပြောရရင်တော့ မိမိဘာခံစားနေရတယ်ဆိုတာကို သိပါစေ၊ ခံစားချက်တွေ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေရှိရင် ချုပ်တည်းမထားပါနဲ့၊ မိမိအိမ်ထောင်ဖက်ကို ပွင့်လင်းစွာပြောပြပါ။ ဒါမှသာ သင့်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာက စိတ်ခံစားချက်ကြောင့်လား၊ ရောဂါအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်လားဆိုတာ သေချာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိမှ နဂိုကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ နှစ်ဦးသားဆက်ဆံရေးကို ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ရပါတယ်။ ။